करिश्मा एमसिसीको विपक्षमा - Prabhav Khabar
करिश्मा एमसिसीको विपक्षमा
काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाका विषयमा मुलुकभर चर्चा छ । एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयमा फरक मत प्रकट भइरहेका छन् । एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणले त यसको चर्चा अझैँ उचाइमा पु¥याइ दिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा मुख्यतः तीनवटा मत देखा परेका छन् । एकथरी एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने पक्षमा छन् । अर्कोथरी एमसिसीका केही बुँदा शंशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । अर्कोथरी कुनै पनि हालतमा एमसिसी पारित हुन नहुने पक्षमा छ ।
एमसिसीको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाले सडक संघर्ष नै सुरु गरेका छन् । नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले सोमबारमात्र पनि काठमाडौंको खुलामन्चमा विरोधसभाको आयोजना गर्‍यो । उक्त सभामा सो पार्टीका नेतासहित अन्य विभिन्न दल तथा संघसंस्थाका नेताहरूले एमसिसी कुनै पनि हालतमा नेपालको संसदबाट पारित हुन नहुने मत राखे । यसबाहेक दैनिकजसो मुलुकको संघीय राजधानीसहित सबैजसो भागमा एमसिसीविरुद्ध प्रदर्शनसमेत भइरहेका छन् ।
यसैक्रममा एमसिसीको सन्दर्भमा नेपाली कलाकारहरूले समेत आफ्नो मत व्यक्त गर्न थालेका छन् । गत शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भिडियो पोष्ट गर्दै अभिनेता राजेश हमालले घुमाउरो शैलीमा जनतालाई स्वीकार हुन नसकेको एमसिसी सम्झौता लागू गर्न नहुने बताएका थिए । नागरिकको भावनामा ठेस पु¥याएर वा चित्त नबुझाई यसलाई लागू गरेमा त्यसले दूरगामी असर पार्ने हमालको भनाइ छ ।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिएकी छन् । एमसीसीले जनतालाई दुःख दिने आशय व्यक्त गर्दै उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘घरमा हात्ती ल्याएर घरका मान्छे बाहिर बस्नुपर्‍यो भने हात्ती ल्याउनु ठीक होला ? घरभित्र कलह हुने तत्व भित्र्याउनु ठीक होला ? अगुवाइ गर्नेहरूको विगतका निर्णयका परिणामले गर्दा नै जनतामा यो अविश्वास उब्जाएको होला नि त ।’ एमसिसीको बारेमा ठोकुवा गरेर जनतालाई बुझाउन आग्रह गर्दै करिश्माले जनताको विरोधमा गएर अगुवाइ गर्न नहुने बताएकी छन् । नेपाल र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीबीच १४ सेप्टेम्बर ०१७ मा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको थियो ।
Published On: Wednesday, September 15, 2021 Time : 3:17:34